प्रवास – Page 92 – Etajakhabar
नेपाली संस्कृति र सद्भाव बोकेर फर्कियो अमेरीकी टोली
कञ्चनपुर, ४ वैशाख । दुर्गम बस्तीमा विद्यालय बनाउनका लागि रकमसहित श्रम गर्न कञ्चनपुरको पिलरीफाँटामा आएको अमेरिकाको लिवर्टी हाइस्कुल वासिङ्टनका अभिभावक र विद्यार्थीको टोली नेपाली संस्कृति र सद्भाव बोकेर घर फर्किएको छ । नौ विद्यार्थी र छजना अभिभावकसहितको मणिकाधाम पञ्चकोटी बालविद्यालयको भवन निर्माणका लागि वेलडन संस्थाको सहयोगमा विद्यालयमा श्रम गर्न पुगेको टोलीले एक सातासम्मको बसाइँमा नेपाली संस्कृत...
कोरियाली भाषा परीक्षा दिँदै हुनुहुन्छ ? कहाँ–कहाँ छन् आवेदन केन्द्र ?
काठमाडौं, ४ बैशाख- आगामी बैशाख ४ र ५ गते हुने कोरियाली भाषा परीक्षाका लागि यही बैशाख १५ देखि १८ गतेसम्मका लागि फाराम भर्ने समय तोकिएको छ । फराम भरेकाहरुले काठमाडौं उपत्यकामा निम्न केन्द्रबाट आवेदन बुझाउन सक्नेछन् १. वनकालीस्थित नेपाल वेद विद्याश्रम संस्कृति मावि २. महाराजगन्जको काठमाडौं भ्याली उच्च मावि ३. कीर्तिपुरको ल्याबरोटरी उच्च मावि ४. सातदोबाटोको महेन्द्र आदर्श विद्याश्रम ५. बालकुमार...
गोरखा, ३ वैशाख । भूकम्पले ध्वस्त गोरखाको बुङ्कोटस्थित रामेश्वरी माध्यामिक विद्यालय पुनःनिर्माणमा सघाउँदै आएका एक अमेरिकी नागरिकले नेपाली परम्परा (हिन्दू संस्कार) अनुसार विवाह गरेका छन् । अमेरिकास्थित क्यालिफोर्निया राज्यका ५५ वर्षीय डानियल र ४९ वर्षीया लीलाबीच विवाह भएको हो । डानियल क्रिश्चियन धर्म मान्छन् भने लीला हिन्दू धर्मावलम्वी हुन् । गाउँलेहरु दुलही पक्ष र दुलाह पक्षमा विभाजित हुँदै जन्ती ...
छुरा प्रहारबाट घाइते साउदी अबरका कावा राजदूत शर्माको अवस्था सामान्य
साउदी अरब, ३ वैशाख । छुरा प्रहारबाट घाइते भई अस्पताल भर्ना भएका साउदी अरबका लागि नेपाली कार्यवाहक राजदूत आनन्दप्रसाद शर्मालाई डिस्चार्ज गरिएको छ । छुरा प्रहारबाट मुख, काँध र औँलामा गम्भीर चोट लागेका शर्मालाई उपचारपछि बिहीबार साँझ डिस्चार्ज गरिएको दूतावासका द्वितीय सचिव विजय राउतले जानकारी दिनुभयो । राउतका अनुसार शर्माको काँध र मुखमा टाँका लगाइएको छ । उपचारपछि कावा राजदूत शर्माको अवस्था अहिले स...
प्रलोभनमा परेर लेवानन गएकी महिला अलपत्र
काठमाडौं, वैशाख ३ । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका १८ फूलबारी ‘डी’ गाउँकी २७ वर्षीया सावित्री विक सुनार एक वर्षअघि राम्रो कमाई हुने आसमा लेबनान् गइन् । ११ वर्षको छोरा राहुल र घरपरिवार छाडेर गएकी सावित्रीले लेबनान गएरा राम्रो कमाउन त सकिनन् नै, स्वदेश फर्किन पनि असमर्थ भएकी छिन् । उनलाई गाउँकै चिनजानका ईश्वर लामाले लेबनान पठाएका थिए । राम्रो कमाई हुने प्रलोभन दिएर उनले सावित्रीलार्य लेबनानस्थि...
नेपाली राजदूतमाथि साउदीमा छुरा प्रहार
काठमाडौं, वैशाख ३ । साउदी अरबको रियादस्थित नेपाली दूतावासका कावा राजदूत आनन्दप्रसाद शर्मामाथि आज आक्रमण भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार दूतावासमा शरण लिइरहेका एक नेपाली युवकले नै शर्मामाथि आक्रमण गरेका हुन् । घाइते शर्माको साउदी अरब किङ पैmसाल अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा उपचार भइरहेको छ । आक्रमणकारीलाई साउदी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कानुनी कारबाही अगाडि बढाएको छ । आक्रमणबाट घाइते भ...
नेपाली युवकद्धारा साउदी स्थित नेपाली राजदुतमाथी छुरा प्रहार, घाइते राजदुतको आकस्मिक कक्षमा उपचार हुँदै
काठमाडौँ, २ वैशाख । साउदी अरबको रियादस्थित नेपाली दूतावासका कावा राजदूत आनन्दप्रसाद शर्मामाथि आज आक्रमण भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार दूतावासमा शरण लिइरहेका एक नेपाली युवकले नै शर्मामाथि आक्रमण गरेका हुन् । घाइते शर्माको साउदी अरब किङ अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा उपचार भइरहेको छ । आक्रमणकारीलाई साउदी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कानुनी कारबाही अगाडि बढाएको छ । आक्रमणबाट घाइते हुनुभए...
विसं २०७२: वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा विवादास्पद वर्ष
काठमाडाैँ, २ वैशाख । विसं २०७२ वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा विवादास्पद वर्ष बन्यो । निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र हवाई टिकटको व्यवस्था, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको आन्दोलन, प्रहरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर कार्यालयमा हानेको छापाका कारण वर्षभरी वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र चर्चाको केन्द्रमा रहिरह्रयो । स्वास्थ्य परीक्षणमा बायोमेट्रिक प...
वैदेशिक रोजगारीमा विवादास्पद बर्ष २०७२ साल
काठमाडाँैं, १ वैशाख । विसं २०७२ वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा विवादास्पद वर्ष बन्यो । निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र हवाई टिकटको व्यवस्था, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको आन्दोलन, प्रहरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर कार्यालयमा हानेको छापाका कारण वर्षभरी वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र चर्चाको केन्द्रमा रहिरह्रयो । स्वास्थ्य परीक्षणमा बायोमेट्रिक ...
वैदेशिक रोजगारीमा साउदी पुगेका खोटाङका विष्णु राना बेपत्ता, परिवार चिन्तामा
दमाम (साउदी अरब), ३० चैत । वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा साउदी अरब आएका एक नेपाली युवक साउदी अरबमा बेपत्ता भएका छन् । तीन वर्ष अघि साउदी अरब आएका खोटाङ, मङ्गलटार–४ भदौरेका ३५ वर्षीय विष्णुबहादुर राना बेपत्ता भएका हुन् । काठमाडाँैंमा रहेको राज ओभरसिज म्यानपावर कम्पनी मार्फत साउदी आएका राना जुबेलस्थित नेस्मा होल्डिङ कम्पनीमा कार्यरत थिए । साउदी आएको छ–सात महिनासम्म घरपरिवारसँग सम्पर्कमा रहेपन...